The World of Moe Thanzin: January 2010
ကျွန်မတို့မိသားစုဝင်တွေအားလုံးက ဂီတကိုစိတ်ဝင်စားကြတယ်.. ငယ်ငယ်လေးကတည်းက ဖေဖေဂစ်တာတီးပြီး ဆိုဆိုပြနေကြသီချင်းတွေဆို ခုထိတောင် နားထဲစွဲနေတုန်း.. မေမေကလဲ သီချင်းအဆိုကောင်းသား.. သူကတော့ မြန်မာသံ မိုနိုစစ်စစ်ပေါ့.. ချိုပြုံး.. မာမာအေး တို့သီချင်းတွေဆိုပိုင်မှပိုင်ပဲ.. ဖေဖေဆိုနေကျကတော့ စိုင်းထီးဆိုင်တို့ တက္ကသိုလ်အေးမောင်တို့ လားရှိုးသိန်းအောင်တို့ သီချင်းတွေပေါ့.. ကျွန်မတို့ခောတ် အဆိုတော်တွေကိုလည်း ဖေဖေရောမေမေရော ကြိုက်ကြပါတယ်.. ဟစ်ဟော့တွေ ရပ်တွေကို မကြိုက်ကြပေမယ့်.. ရော့ခ်တွေ ဟဲဗီးမက်တယ်လ်တွေအထိ သူတို့ ကြိုက်ကြတယ်.. ဖေဖေဆို ဖြူဖြူကျော်သိန်းကို သိပ်သဘောကျတာ.. ဖြူဖြူကျော်သိန်းမတိုင်ခင်က မဒီကိုကြိုက်တယ်တဲ့.. ခောတ်မီတယ်နော်..
ကျွန်မတို့မောင်နှမသုံးယောက်စလုံးလဲ သီချင်းဆိုရင် အကုန်နားထောင်တာပဲ.. ညီမလေးကအဆိုးဆုံး.. ထွက်သမျှသီချင်းခွေတွေ အကုန်ဝယ်တာပဲ အခွေငှားဆိုင်တောင်သူ့လောက်စုံမယ်မထင်ဘူး.. ကာရာအိုကေကလည်း ဆိုလိုက်ရတာအမော.. မောင်လေးကျတော့ အတီးဘက်ကို ပိုအားသန်တယ်.. ဂစ်တာတီးတာပေါ့.. ဘယ်မှာမှ မယ်မယ်ရရ မသင်ဖူးပေမယ့် တော်တော်လေးတီးတတ်သား.. သီချင်းတွေဘာတွေလဲ ရေးထားတာရှိသေးတယ်.. သူရေးတဲ့သီချင်းကို သူ့သူငယ်ချင်းတွေကဆို.. သူက အသံဖမ်းနဲ့ ပျော်နေရော.. အိမ်ကို သူ့သူငယ်ချင်းတွေလာပြီး သီချင်းတွေဆို အသံတွေသွင်းကြပြီဆို ဖေကတပြုံးပြုံးနဲ့.. ကျွန်မတို့ဖေဖေက သားသမီးတွေကို ဘယ်တော့မှမဆူဖူးဘူး.. လေသံမာမာတောင်မပြောဖူးဘူး.. ဒီတော့ ကျွန်မတို့က ဖေဖေ့ကိုဆို မကြောက်ပါဘူး.. ဘာမဆို ဖေဖေနဲ့တိုင်ပင်ဖြစ်တယ်.. များသောအားဖြင့် အဖေတွေက သားတွေကို စိတ်တိုင်းမကျတတ်ဘူးမဟုတ်လား.. ဖေဖေနဲ့မောင်လေးကတော့ အရမ်းတည့်ကြတယ်.. မောင်လေးနိုင်ငံခြားမသွားခင်အထိ သားအဖတွေ တစ်ခုတင်တည်း အတူတူအိပ်ကြတာလေ.. သူ့သားလေးက သူ့လိုပဲ ဂီတကိုစိတ်ဝင်စားတော့ အရမ်းသဘောကျပေါ့.. ဂစ်တာလိုချင်တယ်ဆို ချက်ချင်းဝယ်ပေးတာပဲ.. သူကိုယ်တိုင် သင်ပေးတယ်.. ကျွန်မတို့အိမ်ကတော့ သီချင်းသံတွေညံနေရောပေါ့..
ကျွန်မလဲ သီချင်းဆိုတာ ၀ါသနာပါပါတယ်.. ဂစ်တာတီးလဲ သင်ဖူးတယ်.. နည်းနည်းပါးပါးတော့ တီးတတ်ဆိုတတ်တယ်ပေါ့လေ.. တကယ်ကို နည်းနည်းပါးပါးပါ.. ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပါတ်က မေမေ့သူငယ်ချင်း ဦးအောင်မြိုင်သင်းက မေးလာတယ်.. စတေ့ခ်ျရှိုးမှာ ဆိုရဲလားတဲ့.. ကျွန်မက စင်ပေါ်မှာတီးဝိုင်းနဲ့ မဆိုဖူးပေမယ့် ကာရာအိုကေတော့ ဆိုနေကျပါ.. ဖြစ်ပါ့မလားမေးတော့ သူက စမ်းကြည့်တာပေါ့တဲ့လေ.. ဒါနဲ့ပဲ မနေ့က သီချင်းသွာတိုက်ဖြစ်တယ်.. အဆင်ပြေပါတယ်.. ၂ပုဒ်ဆိုဖြစ်မယ်.. ဆုန်သင်းပါရ်ရဲ့ ချယ်ရီမြို့ရယ်.. ကော်နီနဲ့ဘိုဘိုရဲ့ မြတ်နိုးခြင်းမိုးတိမ်ရယ်ပေါ့.. ဆိုတဲ့သူတွေအားလုံးက ၀ါသနာရှင်တွေဆိုပေမယ့် အားလုံးက အရမ်းတော်ကြတယ် (ကျွန်မမပါ).. တီးဝိုင်းကလည်း အရမ်းကောင်းပါတယ်.. စလုံးကမောင်နှမတွေ ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် လာအားပေးစေချင်ပါတယ်ရှင်.. အစီအစဉ်လေးကတော့ အောက်မှာရေးထားတဲ့အတိုင်းပါပဲ.. လက်မှတ်တစ်စောင် ၁၅ ဒေါ်လာပါတဲ့ရှင်.. စောစောလာတဲ့သူတွေကို ဘူဖေးလဲကျွေးဦးမှာတဲ့..
VENUE:NTU ALUMNI CLUB (8TH DEGREE LONGUE)
11 SLIM BARRACK RISE
ရေးသူ ပွင့်မြုးဇင် at 12:31 PM 8 comments:
ငါဟာ ... အတောင်ပါတဲ့သစ်စေ့လေး ...
လေဟုန်စီးလို့ ပျော်ခဲ့ရတာကခဏ ...
မြေတလင်း သက်ဆင်းရတဲ့အခါ ...
အေးစက်စက် စောင့်ကြိုနေခဲ့တယ် ...
စိုးခဲ့ရသေး ... ...
ဒါပေမဲ့ အမေ ... ...
အမေ့သားတွေ စွမ်းပါသေးတယ် ...
ရေးသူ ပွင့်မြုးဇင် at 10:56 AM4comments:
၂၀၀၉ အကုန် ၂၀၁၀ အကူး
သားသားမွေးနေ့မတိုင်ခင်ကတည်းက များလိုက်တဲ့အလုပ်ဆိုတာ... ဘလော့တောင်မရေးအား... ဘလော့ပေါက်စေ့လဲ မလည်အားနဲ့... ကျွန်မအလုပ်ရဲ့ သဘောသဘာဝကိုက နှစ်ကုန်ပိုင်းဆို အလုပ်များတတ်တာမျိုး... တစ်နှစ်ပါတ်လုံးလုပ်ထားသမျှ နှစ်ကုန်ရင် စာရင်းစစ်ဝင်တော့တာလေ... လိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေပြင်ဆင်... ဘော့စ်ကို Auditor တွေမေးနိုင်တဲ့ မေးခွန်းတွေရဲ့အဖြေတွေရေးပေးနဲ့ နေ့တိုင်းလိုလိုကို အချိန်ပိုဆင်းနေရတော့တာ... ကိုယ်လုပ်နေကျ အလုပ်တွေက များနေရတဲ့ကြားထဲ နှစ်ကုန်ဆုကြေးတွေအတွက် လုပ်ပေးပါဦးဆိုတော့လဲ လုပ်ပေးရပြန်ရော... မနှစ်ကဆို ဆုကြေးကိစ္စတွေဘာတွေက ကိုယ်နဲ့လုံးဝမဆိုင်တာတွေလေ... မနှစ်ကနှစ်လည်လစာတိုးမယ့်အချိန် လစာကိစ္စတွေကိုင်ရတဲ့ တရုတ်လေးက အလုပ်ထွက်ပါတယ်... ဘယ်သူမှလုပ်မယ့်သူမရှိတော့ မနေနိုင် မထိုင်နိုင်လုပ်ပေးလိုက်မိတာ... ခုတော့ ရှိသမျှ Salary Administration တွေ ကိုယ့်ဆီရောက်လာပါတော့တယ်... ပညာရတာပေါ့လေ လို့ပဲ သဘောထားပြီး ကြည်ကြည်ဖြူဖြူပဲ လုပ်ပေးပါတယ်... ရလာဒ်ကတော့ ဘလော့လေးမှမရေးအား.. စာလေးမှ မဖတ်အားပါပဲ... တနေ့တနေ့ မော်နီတာထဲ ခေါင်းစိုက်မတတ် စာရင်းဇယားတွေနဲ့ နပန်းလုံးနေရပါတယ်...
အလုပ်တွေရှုပ်နေရင်းကပဲ သားသားရဲ့မွေးနေ့လေးကို East Coast မှာပျော်ပျော်ပါးပါး ဆင်နွှဲလိုက်သေးတယ်... အဲဒီနေ့က အရောက်လာခဲ့ကြတဲ့ မောင်နှမတွေကိုလည်း အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်... ဧည့်ဝတ်မကျေတာများရှိရင်လည်း တွေ့ပုချိပါနော်... တစ်ညလုံးနေစေချင်တာ... မနေပဲပြန်သွားကြတယ်... တညလုံးစားကြမယ်ဆိုပြီး လုပ်ထားတဲ့ ပုဇွန်တွေ ငါးတွေ အသားတွေက အများကြီးရယ်လေ... နောက်နေ့အထိ မကုန်နိုင်ဘူး...
နောက်တစ်ပါတ်ဆို စာရင်းစစ်လာပါပြီ... ၇ရက်တောင်တဲ့... ဘာတွေများစစ်ဦးမယ်မသိဘူး... ပြီးရင်တော့အေးပြီ... မြန်မြန်ပြီးစေချင်နေပြီ... စိတ်ရှုပ်လို့... ဒီလောက်မအားရတဲ့ကြားက ဆံပင်ကလဲ ဖြောင့်လိုက်သေးတယ်... ရန်ကုန်က လာလည်တဲ့ အစ်မတစ်ယောက်က လုပ်ပေးတာ... အိမ်မှာတင်လုပ်တာဆိုတော့ အဆင်ပြေတယ်လေ... နှစ်သစ်မှာ hair style အသစ်နဲ့ပေါ့...
နောက်လထဲကျရင် ရန်ကုန်ကို တစ်ပါတ်လောက် အလည်ပြန်ပါမယ်... ၁၃ရက်နေ့ Silk Air နေ့ခင်းဘက် ဖလိုက်နဲ့ပါ... မက်မက်နဲ့ လေယာဉ်တစ်စီးတည်းပေါ့... အတော်ပဲ... သားသားကို ကူထိန်းခိုင်းရမယ်... ရန်ကုန်ရောက်ရင် လည်ရမယ့်နေရာတွေ စားရမယ့်အစားအစာတွေလည်း စာရင်းလုပ်ထားပြီးပြီ... စာရင်းစစ်လာမှာကို တွေးပြီး စိတ်ညစ်တိုင်း ရန်ကုန်ပြန်မှာကိုတွေးပြီး ဖြေနေရတယ်... ရန်ကုန်ရောက်ရင် မင်္ဂလာဆောင်နှစ်ခုတောင် သွားရဦးမယ်... တစ်ခုက ဘလော့ဂါတစ်ယောက်ရဲ့ မင်္ဂလာဆောင်လေ... Valentine's Day မှာ မင်္ဂလာဆောင်ကြမှာ... Romantic ပဲနော်... ကိုယ်တောင်ပြန်ဆောင်လိုက်ချင်တယ်... သားသားကို flower boy လုပ်ခိုင်းပြီးတော့လေ... Wedding Gown ကတော့ ဆွဲစေ့လို့တောင်မရတော့ဘူး... :)
အရည်မရ အဖတ်အရတွေ ရေးမိပါတယ်... အချိန်ကုန်... မျက်စေ့ညောင်းသွားရင် တွေ့ပုချိပါနော်... ကျွန်မရဲ့ လုပ်ခဲ့သော လုပ်နေသော လုပ်မည်ဖြစ်သော ကိစ္စများဖြစ်ပါကြောင်း...........
ရေးသူ ပွင့်မြုးဇင် at 6:36 PM6comments: